Ku soo Dhawada Iskulka Guugd ee Des Moines - Des Moines Public Schools
In ka badan 100 sano, Iskula Guud ee Des Moines waxbarista ardayda ee magaalada Iowa. Maanta, waxaynu nahay bixiyaha ugu weyn ee waxbarashada Guud ee Iowa, in ka badan 30,000 oo ah ardayda iyo ku dhowaad 5,000 macalimiinta iyo shaqaalaha goobta shaqada ee ka badan 60 dugsi oo bulshada oo dhan.
Dugsiyada Guud e Des Moines oo wuxuu ku faraxsan yahay in ay ugu adeegaan ardayda iyo qoysaska ku hadla in ka badan 80 luqadood iyo lahjadood oo kala duwan. Fadlan dib u hubi baalkani mustaqbalka dhow wixii macluumaad ah ee dugsiyada dheeraad ah iyo barnaamijyada waxbarashada laga heli karo <luqooyinka>.
Arimaha Magalada Des Moines iyo Iskulka Guud ee Des Moines
Des Moines waa magaalo firfircoon, cusub oo kala duwan. Dhab ahaantii, kaalinta majaladda waalidiinta Des Moines oo ku jito liisaska # 5 magaalooyinka dalka ugu fiican ee qaranka sida qosaska, taasoo qayb ahaan sabab u ah Iskulada weyn iyo fursado waxbarasho.
U nisbayn waxaa ka muuqda dhanka Iskul degmaydka oo barnaamijyada ballaadhka aanu bixiyaan iyo ardayga aanu u adeegno iyo waalidiinta, macalimiin iyo shaqaalaha kala duwan, kuwaas oo dhammaantood gacan ka geystaan, waxbarashada DMPS. Waa fursado balaaran ee Des Moines oo la kulmay danaha tacliimeed, kartidooda iyo gool arday kasta.
Degmada Iskuleyd oo kala duwan ugu weyn ee barnaamijyada waxbarashada – badan oo iyaga heer qaran caan – in Iowa. Taas waxaa ka mid ah manhajka International Baccalaureate ugu horreeya ee gobolka iyo Iskulka Montessori dadweynaha oo kaliya . Sida laga soo xigtay University of Iowa ee Xarunta Belin – Blank for Gifted Education, Central Academy ee ” diiwaanka heer sare leh Advanced Placement waa sharaf loogu talagalay gobolka oo dhan ee Iowa , ” soo saara more National AP Scholars in muddo hal sano ah ay dhawaan ka badan 13 dawladood oo dhan! Oo waxaas oo dhan shan ka mid ah dugsiyada sare waxaa lagu kaalinta on AP Iowa ee Index.
Iskulka Downtown waxaa loo arkaa nooc qaran. Dugsiyada Dhowr shaqeeyaan on kalanderka joogto ah sanadka oo dhan , iyo Institute Career & Tech gaarsiisaa tababar wax kasta oo ka soo Farshaxanka, Kuliyadda si technology duulimaadyada.
Ku soo Dhawada website iyo idinko aad u mahadsantihin inaad danaynaysiin Iskula Guud ee Des Moinesin, Iskul degmada in ay ku faanan waxaa la soo dhaafay iyo diyaarisay mustaqbalka.